Ole Gunnar Solskjaer oo si maldahan u sheegay inuu berri keydka dhigi doono daaficii sababta u ahaa guuldarradii Man United ka soo gaartao Kooxda Crystal Palace – Gool FM
(Manchester) 25 Sebt 2020. Tababaraha Kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa si maldahan u sheegay inuu diyaar u yahay inuu isbedel ku sameeyo daafaca kooxdiisa kulanka Premier League ee berri oo Sabtida ah ay la ciyaarayaan naadiga Brighton.
Hoggaamiyaha reer Norway ee Ole ayaa goob joog u ahaa iyadoo kooxdiisa ay guuldarro xanuun badan ku qaadanayso garoonkeeda Old Trafford, isla markaa ay khasaaro 3-1 ka soo gaartay Crystal Palace.
Inkastoo kooxda Crystal Palace ee uu hoggaamiyo Tababare Roy Hodgson ay bandhig cajiib ah sameeyeen kulankaas oo ay u qalmeen inay dhibcaha qaataan, haddana waxa ay kooxda martida ahayd ka faa’iideysatay fursado ay ka heleen Man Utd oo uu sameeyey daafaca dhexe ee kooxdaas, Victor Lindelof.
Xiddigan reer Sweden waxaa kabaha la dulmaray Wilfried Zaha oo ugu shubay goolkii furitaanka ciyaarta, sidoo kalena waxa uu kooxdiisa ku keenay Lindelof gool ku laadkii guusha u xaqiiyey Crystal Palace.
Macallin Solskjaer ayaa haatan diyaar u ah inuu daafaca reer Ivory Coast ee Eric Bailly oo dhowaan ka soo kabsaday dhaawac uu la maqnaa ku soo bilaabo shaxdiisa, islamarkaana uu kursiga keydka u dhaadhiciyo Lindelof, sida laga dheehan karay hadalkiisa.
Waxa uu yiri Solskjaer isagoo ku guda jiray shirkiisa jaraa’id ee ka horreeya kulanka berri ee Brighton: “Waxaan aaminsanahay in xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay cadeyn inoo aheyd sida fiican ee aan wax u difaacan karno, isbuucii hore ma aynan ahayn kuwa cajiib ah, waxaa inaga dhashay goolal aan qaladkeeda leenahay.
“Laakiin rikoorka daafaceenna ee xilli ciyaareedkii hore waa uu fiicnaa gaar ahaan iska garab ciyaarista Eric iyo Harry aad ayay u fiicnayd.”
“Eric waa taam mar kale, waana faa’ido wayn, waxaana doonayaa inuu horumar sameeyo oo uu kulamo badan ciyaaro, waxaan sugeynay inuu taam noqdo oo uu si joogta ah u ciyaaro.”
Luis Suarez oo gaaray Magaalada Madrid si uu u dhammaystiro ku biiristiisa Kooxda Atletico Madrid... (Miyuu ciyaari doonaa kulanka Axadda?)